Dalxiiska Kenya oo hoos-u-dhac yar sameeyay rubuca ugu horeeya ee sannadka - Sabahionline.com
Dalxiiska Kenya oo hoos-u-dhac yar sameeyay rubuca ugu horeeya ee sannadka
Maajo 20, 2012
Tirada dalxiisayaasha yimid Kenya Rubuc-sannadeedka hore ee 2012-ka ayaa xaqiijiyay hoos-u-dhac yar, sida ka muuqata tirakoob ay Jimcihii (18-ka May) sii daysay Wasaaradda Dalxiiska. Qodobbo la xiriira
Wasiirka cusub ee dalxiiska ee Kenya oo diiradda saari doona kaabayaasha
Koboca dalxiiska Kenya oo la filayaa in uusan kordhin sanadka 2012
Kibaki oo ku baaqay in ganacsadayaasha loo sameeyo sharci-hoosaadyo la hagaajiyey
Muddadii u dhexeeysa January iyo March ee sannadka ayaa waxa soo gaaray Kenya 312,258, halka ay isla muddadaas sannadkii 2011-kii ahaayeen 313,000, taasoo u dhiganta hoos-u-dhac u ah kala-bar hal boqolkiiba. Kaliya kala bar kamida 31 suuq ee caanka ku ah dalxiiska ayaa sameeyay koror tirada dalxiisayaasha ah, sida uu qoray wargayska Daily Nation ee Kenya. Wasiirka Dalxiiska Dan Mwanzo ayaa ku sababeeyay hoos-u-dhaca in uu ka dhashay afduubyada iyo colaadaha ka taagan waddanka. “Afduubyada ka dhacay xeebta Kenya ayaa dhaawacay muuqaalkii dalka isla markaana saameeyn ku yeeshay sumcaddiisii in uu yahay meel ku habboon in loo dalxiis tago,” ayuu yiri.
Yeelkeede, Mwanzo waxa uu ku hamiyay in dakhliga sannadka 2012-ka uu sameeyn doono koror 5% (Shan boqoliiba) ah. Bishii February, Wasiirkii hore ee Dalxiiska Najib Balala ayaa sheegay in uu filayo in kororka dalxiiska ee 2012-ka uu ahaan doono mid aan horumar sameeyn.